Laba Wariye oo ku kala xiran Muqdisho & Baydhabo iyo mid kale oo halis ugu jiro in la xiro | Dhacdo.com
Home Dhacdooyinka Laba Wariye oo ku kala xiran Muqdisho & Baydhabo iyo mid kale...
Laba Wariye oo ku kala xiran Muqdisho & Baydhabo iyo mid kale oo halis ugu jiro in la xiro
Wariye-yaasha kala ah Daauud Cabdi Daauud iyo C/qaadir Barre Macalin ayaa ku kala xiran xabsiyo ku kala yaala Magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo, xilli aanay jirin wax maxkamad ah oo la horkeenay.
Daauud Cabdi Daauud oo ka mid ah Saxafiyiinta degan Magaalada Muqdisho, kana soo shaqeeyay idaacado dhawr ah ayaa 5-tii bishii September lagu xiray Xarunta Hay’adda Dembi Baarista Cid, iyadoo bartamihii bishaasina loo gudbiyay Xabsiga Dhexe ee Xamar. Wariyahan ayaan mudadaasi la horkeenin wax maxkamad ah.
Wariyaha oo mar sii horeysay la hadlay Radio Kulmiye ayaa sheegay inaanu garanayn sababta uu u xiran yahay, ha yeeshee uu maqlay in loo haysto wada sheekeysi Hoteelada Magaalada Muqdisho ku dhex martay isaga iyo Saraakiil CID ah, balse isu soo ekeysiiyay in ay rayid yihiin. Xubnahan ayuu sheegay in uu ogaaday inay Saraakiil yihiin, intii uu ku xirnaa Xarunta CID-da.
C/qaadir Barre Macalin oo ka mid ah Wariye-yaasha Magaalada Baydhabo ayaa waxaa daba-yaaqada bishii hore ee September lagu xiray Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay, xilli lala xiray siyaasiyiin ka soo jeeda Koonfur Galbeed.
Xubnahan ayaa waxay xariga ku muteysteen hadal ay jeediyeen, waxayna dad badani wax lala yaabo ku sheegeen in dad loo xir xiro hadal ay jeediyeen, oo aan dhibaato horseedi karin, isla-markaana aan dareenka dadka kicinaynin.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inaanan la qabin karin shirar lagu dhaliilayo Dowladda Federaalka, ciddii amarkaasi jebisana ay tallaabo adag ka qaadi doonaan. Xubnaha ku xiran Baydhabo ayaa xarigoodu ka horeeyay awaamiirtan.
Wariye-yaasha Magaalada Baydhabo ayaa tallaabada lagu xiray xubnahaasi ku macneeyay mid lagu diidan yahay xoriyatul qowlka, waxayna ku baaqeen in Wariyaha xiran si deg deg ahi loo sii daayo.
Cali Ilyaas C/laahi, Gudoomiye Kuxigeenka 1aad ee Ururka Saxafiyiinta Qaranka Soomaaliyeed (NUSOJ) oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee VOA ayaa cambaareeyay xariga loo gaystay Wariye C/qaadir Barre Macalin.
Gudoomiye Kuxigeenka 1aad ee NUSOJ ayaa Madaxda Maamulka Koonfur Galbeed oo uu ugu horeeyo Madaxweyne C/casiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ugu baaqay in xoriyadiisa dib loo siiyo Wariyaha xiran.
Ilo wareedyo ayaa Dhacdo.com u sheegay in Wariye C/qaadir Barre Macalin loo gudbiyay Gaalshiraha Baydhabo, ka dib markii laga wareejiyay Saldhiga Booliska oo uu ku xirnaa.
Dhanka kale Agaasimaha Radio Daljir, Axmed Sheekh Maxamed (Tallman) ayaa halis ugu jira in uu xabsi ku muto warbixin laga sii daayay Radio Daljir. Xafiiska Xeer Ilaalinta Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Puntland ayaana lagu eedeeyay in uu dhabarka ka riixayo qorshaha lagu xirayo Agaasimaha.
Maxkamadda Sare ee Ciidamada Qalabka Sida Puntland ayaa 24-kii bishii September soo saartay warqad ay ugu yeereyso Agaasimaha Radio Daljir in Sabtida uu ku horyimaado Maxkamadda, iyadoo uu amarkaasi daba socdo mid ka soo baxay Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka, 23-kii September.
Warqadda Maxkamadda ayaa waxaa ku xusan eedeymo loo soo jeediyay Agaasimaha Radio Daljir, iyadoo eedeymahaasi loo cuskaday qodobada 382,333 iyo 287 ee Xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed. Qodobada loo cuskaday eedeymaha Wariyaha ayaa dhalisay in Puntland la cambaareeyo.
Arrintan oo hadalhayn badan dhalisay ayaa waxay dadku ka keeneen su’aasha ah, sidee Wariye rayid ah ugu yeertaa maxkamad ciidan? Tani ayaa ah mid ka dhan ah sharciga iyo Saxafiyiintaba.
Gudoomiyaha Ururka Warbaahinta Puntland, Maxamed Daahir Caynsane oo arrimahan ka hadlay ayaa sheegay inaanay Maxkamadda Ciidamada Puntland sharciyad u haysan qaadista dacwad la xiriirta warbaahinta iyo shaqadeedaba, sida ku cad buu yiri qodobka 87aad ee Dastuurka Puntland.
Wariye-yaal kale oo Puntland ku sugan oo arrintan taagan ka waramay ayaa Maxkamadda Ciidamada Puntland ku eedeeyay in ay xalaaleysanayso xariga Wariye Tallman, halka ay u socotana ay tahay in ay xabsiga ku hubsato. Wariya-yaasha ayaa ku sheegaya in Tallman uu halis ugu jiro in xoriyadiisa uu waayo.
Ka hor inta aanay Maxkamadda u yeerin Agaasimaha ayaa waxaa ka horeeyay weeraro ay bartamihii bishii September Ciidanka Puntland ku qaadeen Xarumaha Radio Daljir ee Magaalooyinka Boosaaso & Garoowe. Booliska ayaa xilligaa muddo kooban hawada ka saaray idaacadda.
Puntland ayaa waxay u muuqataa mid ka carootay warbixin ay Idaacadda Daljir kaga hadleysay dhimashada maxbuus u xirnaa Puntland, oo u geeriyooday jirdil ay Ciidanka Booliska u gaysteen.
Ururada Suxufiyiinta ee dalka ka jira ayaa ku baaqay in la joojiyo handadaadda iyo xariga lagu hayo Wariye-yaasha dalka ka hawlgala, oo la’ogyahay in daruufo adagi ku shaqeeyan.